किल्ला भ्रमण - Ddus Gajurel Blogs
on Saturday, June 26, 2010 in अनुभब, जिन्दगी एक यात्रा, फोटो
जिन्दगी एक यात्रा :-
यो जिन्दगी यस्तै रहीछ , कहीले कता कहीले कता । दुःख मा पनि हास्नु पर्ने , सुखमा पनि रूनु पर्ने । भनिन्छ दुःख सुख भएन भने जिन्दगीको मजा नै हराउछ । यस्तै प्रकारले जिन्दगीको बाँटोमा हिड्दा हिड्दै जिवनमा पहीलो पटक किल्ला भ्रमण गर्ने अवसर मिल्यो ।
स्थल जानकारी :- तिकोणा किल्ला(वितंडगड), Maharashtra India
१० बजे हामी हामी बसेको ठाँउ बाट गन्तब्यतीर निस्कियैा । हल्का पानी परीरहेको थियो । मैम अती रमाइलो थियो । २ घण्टाको यात्रा पछी हामी हाम्रो यात्रा सुरू हुने ठाँउमा पुगीम ।
यहाँ बाट पैदल हिडेर जानु पर्ने रहेछ । बाटामा जाँदा पानी अलि अलि परिरहेको थियो । साथै गर्मी पनि मज्जाले थियो । मन त्यसै आन्न्दमय भइरहेको थियो
पानी रोकिए पछी हामी उकालो लागीम । बाटो हिलो र चिप्लो थियो ।
किल्ला सुरूवात ,
पहीले त बाटो सजिल्यै लागेको थियो । अलिक माथि पुगे पछी पानी पर्न थाल्यो । बाटो चिप्लो र अफ्टयारो थियो ।
शंखर भगवानको मन्दीर
किल्लाको झण्डा संग
किल्लाबाट बाहीर तर्फ देखिने द्रिस्य
किल्लाको चुचुरोबाट लिएको तस्बिर,
पानी रोकिए पछी स्थानीय बासी गाइबस्तुलाइ खेत तर्फ ल्याउदै
Labels: अनुभब, जिन्दगी एक यात्रा, फोटो
Bed Nath Pulami June 27, 2010 at 12:25 AM
घुम फिर गर्न म पनि तपाइँ कै पछी पछी यो टासो संगै किल्ला भ्रमण मा आइ पुगे है D Dus ji...
निकै रामाइलो ठाउ रहेछ ....(तर कुन ठाउको हो पोस्ट बाट थाह पाउन सकिन है - सरि )
अनि तपाइँ ले पोस्ट गर्दा तस्विरहरुलाई अलिक मिलाएर या अलिक ठुलो बनाएर पोस्ट गर्नु भएको भए अलिक राम्रो हुने थियो !
यस्ता कुराहरु शेर गर्दै जानुस है ... आगामी दिनमा पनि !
धन्यवाद यो टासो को लागि !
Unknown June 27, 2010 at 8:47 AM
सर , यो तिकोणा किल्ला, पुणे शहर बाट ७० किमी उत्तर तर्फ रहेको एतीहाँसीक किल्ला हो,
सुझाप को लागी धेरै धेरै धन्यबाद
निकै रमाइलो ठाउँ रहेछ । तर माथि वेदनाथ जी ले भन्नुभए जस्तै फोटोहरू अलि ठूला साइजमा राख्‍नु भएको भए हेर्न अझै मज्जा आउँथ्यो ।
हुन त म पनि तस्विरहरूको वारेमा जानिफकार हैन, तर पहाड, हिमाल वा टाडाका दृश्य राख्दा सम्भव भएसम्म ठूलो देखिने गरी राख्दा राम्रो हुन्छ । वा तस्विरमै क्लिक गर्दा पुरै पेज ढाकिएर खुल्ने बनाउँदा पनि राम्रो हुन्छ :)